Best members of the month - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 2,244
ပို့စ် 1,011 ခုအတွက် 11,169 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Best members of the month (April)
၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ကိုစံငြိမ်း - 45.83%
၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ နှင့် အကောင်းဆုံး Uploader-
- 42.86% နှင့်အကောင်းဆုံး Uploader -21.62%- bagothar85 - ၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - လူမုန်းနဒီ - 39.29%
၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - bonge - 55.17%
၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - တီဘွား - 44.00%
၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - မေဦးမွန် - 57.89%
မှတ်ချက် ။ ။ ကိုbonge ကတော့ အထူးအသင်းဝင်ဖြစ်လို့.. usertitle ဘဲ ပြောင်းပါတယ်. အထူးအသင်းဝင်နှင့် အကောင်းဆုံးဆောင်းပါးဆရာ လို့ တပ်ချင်ပေးမယ်. မြန်မာလိုအရမ်းရှည်နေတဲ့အတွက် V.I.P နှင့်အကောင်းဆုံးဆောင်းပါးဆရာလို့တပ်ပေးလိုက်ပါတယ်.။
အားလုံးပျော်ရွှင်ကြပါစေ.. ဒီတလအတွက် best of the members များကို ဂုဏ်ပြုပါတယ်..။
အောက်ပါအသင်းဝင် 57 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ချစ်သမီး, ဆန်းမောင်, ဇာနည်စိုး, တာတာ, တီဘွား, ဒဿဂီရိ, ပလူးစ်, မဒီ, လူမုန်းနဒီ, သက်နိုင်, သန့်ဇင်ဌေး, ကျော်တိုး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, ဇေကြီး, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, မြင့်မိုရ်, နိုးတူး, နှင်း, amaung344, arkaraung, aungphyo, AZM, blackNwhite, bonge, futurestar, g00gle, htoo war, kaung kin lu, ko lin, ko min, kyaukphyu, KznT, Lwin Thu, ma mee, mgwinhlaing, MilkyWay, minthike, moethout, new-comer^girl, nightman, nyilinnge, pannuko, powerlight02, PyaitSone, tu tu, yelinoo, zin min aung, zo
25-05-2011, 01:36 AM
တည်နေရာ: Myanmar Family
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 5,864
ပို့စ် 1,284 ခုအတွက် 19,788 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Best members of the month
April လအတွက် အကောင်းဆုံး Members ဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ မိသားစုဝင်များ အားလုံးအတွက် ဖော်ပြလို့ မတတ်အောင် ဝမ်းသာမိသလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဂုဏ်ယူမိပါတယ် - ဒီ အစီအစဉ်လေး ဖြစ်လာဖို့အတွက် အထူးနယ်မြေက Thread တစ်ခုအောက်မှာ Reply ပေါင်း ၄၀ ကျော် - ရက်ပေါင်း ၆၀ ကျော် ဆွေးနွေးပြီး ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတာပါ - ရည်ရွယ်ချက်က ဖိုရမ်ကို ဝင်ဖြစ်ကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ အားသာရာသာရာ ကဏ္ဍလေးတွေအောက်ကိုပဲ ဝင်ဖြစ်ကြပြီး တစ်နေရာတည်းမှာ ခိုအောင်းနေကြတာမျိုးထက်စာရင် ကဏ္ဍအလိုက်မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ Threads တွေရှိတယ်ဆိုတာ မိသားစုဝင်များ သိရှိနားလည်နိုင်အောင်ရယ် - ကဏ္ဍစုံက အကြောင်းအရာစုံကို မြည်းစမ်းကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်း အားသာချက်တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိပြီး လေ့လာပြင်ဆင် မျှဝေနိုင်အောင်ရယ် - ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသမျှ တစ်ဖက်တစ်လှမ်းကနေ သိနားလည်သလောက် မျှဝေပေးနေကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကို ဂုဏ်ပြုပေးချင်တာရယ် စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ အပြင် အခြားရည်ရွယ်ချက်ပေါင်းများစွာနဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကို ကျွန်တော်တို့ အစပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါဟာ တကယ်တော့ ပြိုင်ပွဲ မဟုတ်ပါဘူး - တတ်အားသရွေ့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေရဲ့ စေတနာတရားကို မေတ္တာနဲ့ တုံ့ပြန်မှု ပြုချင်တာမျိုးပါ။ လအလိုက် ရွေးချယ်သွားမယ့် ဒီအစီအစဉ်မှာ မိသားစုဝင်များရဲ့ စေတနာကို Best members ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ တင်စားလိုက်ရပေမယ့် တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ဒီစကားလုံးတွေထက်ပိုပြီး မိသားစုဝင်တွေကို လေးစားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ စနစ်ကျတဲ့ မျှဝေမှုတိုင်းဟာ ဖြစ်သလိုလုပ်လို့ မရပါဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ မဆိုထားနဲ့ဦး သူများရေးထားတဲ့ စာကို Copy / Paste လုပ်မယ် ဆိုရင်တောင် အနည်းဆုံးတော့ အချိန်ပေးရပါတယ်။ ဟိုဝင်ဒီထွက် လုပ်ရတယ်။ လက်မညောင်းဘူး ဆိုရင်တောင် Ctrl+c နဲ့ Ctrl+v တော့ နှိပ်ရသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် မိသားစုဝင်တွေ ဒီ့ထက်ပို ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။ အချိန်ပေးခဲ့ကြတယ်။ အဲ့အတွက် ဒီလမှာ အများဆန္ဒနဲ့ မဲပေး ရွေးချယ်မှုကြောင့် Best members ဖြစ်မလာခဲ့သည့်တိုင်အောင် ကျရာကဏ္ဍကနေ ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း ရှိသရွေ့ ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေ မျှဝေပေးခဲ့ကြတဲ့ လေ့လာသူတွေ အားလုံးကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ အားလုံးရဲ့ ကိုယ်စားပြောကြားချင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖိုရမ်ဆိုတဲ့ သဘောဟာ မေးလာတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ အဓိက ဦးတည်ပြီး တည်ထောင်တာပါ။ ဒါပေမယ့် နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ အဲ့လို တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အပြန်အလှန် မေးနိုင်ဖြေနိုင်ဖို့ နေနေသာသာ မရှက်တမ်းဝန်ခံရရင် နေ့စဉ်ကြုံနေရတဲ့ ကွန်ပြူတာ ပြဿနာကိုတောင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အဖြေမရှာတတ်သေးတဲ့ လူငယ်တွေ / လေ့လာသူတွေ အများကြီး ကျွန်တော်တို့ မြန်မာအသိုင်းအဝိုင်းမှာ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲ့အဆင့်ကနေ တက်လာခဲ့ပါတယ်။ သိချင်တာများတယ် - ပြောပြမယ့်သူ မရှိ - လေ့လာချင်တာများတယ် ဘယ်လိုလေ့လာရမှန်း မသိ - အဲ့လို အခြေအနေမျိုးတွေကို ခု ၂၁ ရာစု နည်းပညာနယ်ပယ်မှာ ကျင်လည်နေကြတဲ့ လူငယ်တွေ ကြုံခဲ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေကနေ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးနိုင်အောင် - ဖြစ်လာနိုင်မယ့် ပြဿနာကို မဖြစ်လာခင်တည်းက ခန့်မှန်းနိုင်အောင် - ပြောရရင် ဖိုရမ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ သိပ်မကိုက်ညီဘူးလို့တောင် ပြောလို့ရတဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆောင်းပါးတွေ ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ ရေးခဲ့ကြတယ်။ အမှန်တကယ် လေ့လာခဲ့သူတွေ ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်ကနေ အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးဆပ်ခဲ့ကြတာ သတိထားမိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သေချာတာ တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ်ကနေပြီး ဘယ်နည်းပညာရပ်ကိုမှ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် တစ်ယောက်လိုမျိုး ဖြစ်လာအောင် မိသားစုဝင်တွေကို တက္ကသိုလ်တစ်ခုလိုမျိုး သင်ကြားပေးနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး - ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မျှဝေနေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဟာ လေ့လာလိုသူ မြန်မာလူငယ်တွေကို အခြေခံကနေ >> ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အားပြုလေ့လာနိုင်မယ့် အဆင့် ထိရောက်လာအောင် လက်တွဲခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးပဲ ရှိပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်တာနက်ကနေ တဆင့် ဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတဲ့ လေ့လာနည်းကို ကျွန်တော်တို့ အဓိက ပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရည်မှန်းချက် အောက်မြင်ဖို့ဆိုရင် အတွေ့အကြုံရှိသူကိုလည်း အားကိုးပါ - ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုးစားပါ။ ဒါဆို လေ့လာမိသလောက် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီ့ထက်ပိုပြီး မျှဝေပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါမယ်။ မိသားစုဝင်များဘက်ကလည်း နောင်များမှာ မိသားစုဝင်ချင်းချင်း ဒီ့ထက်ပိုပြီး အကောင်းဆုံးပံ့ပိုး ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပေးကြဖို့ - ကူညီပေးကြဖို့နဲ့ မျှဝေမှုမှန်သမျှကို အစေ့စပ်ဆုံး အသေချာဆုံးနဲ့ အားနည်းချက် အနည်းဆုံး ဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖန်တီးပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းရင်း April လရဲ့ အကောင်းဆုံး members ဆုရရှိတဲ့ မိသားစုဝင်များအားလုံးကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ KznT.
က,ကြီး ရေးဖို့ကျောက်သင်ပုန်းရှာနေသူ kyawznthant@gmail.com
Last edited by KznT; 25-05-2011 at 11:15 AM..
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ချစ်သမီး, ဇာနည်စိုး, တာတာ, တီဘွား, ဒဿဂီရိ, ပလူးစ်, မဒီ, မျိုးဟန်ထက်, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, သန့်ဇင်ဌေး, ဂေါ်ဖီထုတ်လေး, ဇော်ရဲပိုင်, ဇေကြီး, တောဂေါ်လီ, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, အောင်ဗလ, အေးမင်းမောင်, ငြိမ်းချမ်း, မြင့်မိုရ်, amaung344, arkaraung, Aung Aung, aungphyo, AZM, bagothar85, bonge, bunny, futurestar, htoo war, kaung kin lu, ko lin, ko min, ko myo, kwarsi, kyaukphyu, Lwin Thu, MilkyWay, minthike, new-comer^girl, ninimar, nitutx, nyilinnge, pannuko, PyaitSone, thureinsoe, tu tu, Ye Aung, yelinoo, zin min aung, zo
Best members of the month(May)
၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ကိုစံငြိမ်း - 38.89%
၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ bagothar85 - 37.14%
၃) မေလအတွက်အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ (သတင်းကဏ္ဍ)- မေဦးမွန်
၄) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - ဂေါ်ဖီထုတ်လေး 54.55%
၅) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ -သန့်ဇင်ဌေး
၆) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ -thureinsoe 69.23%
၇) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ -ပလူးစ် 62.50%
၈) မေလအတွက် အကောင်းဆုံး Uploader - thureinsoe 33.33
တချို့ usertitle (ခေါင်းစီး) အရမ်းရှည်နေတဲ့ အတွက် အကောင်းဆုံး ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ( Best) ဆိုပြီး ထည့် ပေးထားပါတယ်.။ အခြေအပေါ်မူတည်ပြီး ထည့် ပေးထားပါတယ်..။ နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါကုန်။
ဒီလအတွက် ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရရှိသွားတဲ့ သူတွေကို အကုန်လုံး ကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါတယ်.
အောက်ပါအသင်းဝင် 45 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ချစ်သမီး, ဇာနည်စိုး, တာတာ, တီဘွား, ယွန်းယွန်း, လူမုန်းနဒီ, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, မြင့်မိုရ်, arkaraung, Aung Aung, aungphyo, AZM, bonge, bunny, g00gle, hellboy, kaung kin lu, kyaukphyu, KznT, Lwin Thu, ma mee, mgwinhlaing, MilkyWay, minthike, new-comer^girl, ninimar, nyilinnge, pannuko, phoetharlay, PyaitSone, thureinsoe, tu tu, yawnathan, yelinoo, zo
13-07-2011, 07:25 PM
နိုင်ငံအလံ: ကျေးဇူးတင်စကား: 14,960
ပို့စ် 3,021 ခုအတွက် 13,670 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Best members of the month (June)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - နေမင်းမောင် - 45.90%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ -bagothar85 - 52.38%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ) - 29.27%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - တာတာ - 50.00%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - dusk - 42.00%
(၆) အကောင်းဆုံး Uploader - thureinsoe - 51.35%
ဇွန်လအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 36 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုစံငြိမ်း, ကိုပျင်း, ဇာနည်စိုး, တာတာ, တီဘွား, ယွန်းယွန်း, လုလု, လူမုန်းနဒီ, သန့်ဇင်ဌေး, ဦးသာကြီး, နေမင်းမောင်, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, အောင်လံလေး, အေးမင်းမောင်, arkaraung, aungphyo, bagothar85, bonge, g00gle, kaung kin lu, Lwin Thu, ma mee, mgwinhlaing, minthike, new-comer^girl, nyilinnge, pannuko, PyaitSone, yawnathan, yelinoo, zo
Best members of the month (July)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - g00gle နှင့် အေးမင်းမောင် - 33.33%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - နေမင်းမောင် နှင့် မောင်ပေါ်ဦး - 24.00%
(၃) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ (သတင်းကဏ္ဍ) -မောင်ပေါ်ဦး - 50.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - ပလူးစ် - 45.16%
(၅) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - တာတာ - 37.50%
(၆) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - တီဘွား - 54.55%
(၇) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - ပလူးစ် - 53.85%
(၈) အကောင်းဆုံး Uploader - thureinsoe - 75.86%
ဇူလိုင်လအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
Last edited by tu tu; 08-08-2011 at 10:27 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 22 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, မျိုးဟန်ထက်, လူမုန်းနဒီ, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, aungphyo, bagothar85, bonge, g00gle, kaung kin lu, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, nyilinnge, pannuko, phyulayswe07, yawnathan, yelinoo, zo
Best members of the month (August)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဆွိ - 44.44%%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - g00gle - 52.94%
(၃) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ (သတင်းကဏ္ဍ) - zo - 50.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - ပလူးစ် - 53.85%
(၅) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - minlatt - 72.73%
(၆) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - တီဘွား - 42.86%
(၇) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - ပလူးစ် - 50.00%
(၈) အကောင်းဆုံး Uploader - စနိုးလေး - 44.44%
သြဂုတ်လအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 24 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, ညီညီသစ်, တာတာ, လူမုန်းနဒီ, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, arkaraung, bagothar85, bonge, g00gle, kaung kin lu, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, nyilinnge, pannuko, phyulayswe07, PyaitSone, yawnathan, yelinoo, zo
Best members of the month (September)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - စနိုးလေး - 44.00%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - စနိုးလေး - 75.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - တာတာ - 35.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - minlatt - 66.67%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - တာတာ - 44.44%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - တီဘွား - 66.67%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - ဇေကြီး - 53.85%
စက်တင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, တီဘွား, လူမုန်းနဒီ, ဇေကြီး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, bagothar85, bonge, g00gle, htun30, kaung kin lu, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, nyilinnge, pannuko, phyulayswe07, yelinoo, zo
Best members of the month (October)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဆွိ - 50.00%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ငြိမ်းချမ်း - 75.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - moe_poung - 80.00%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - တီဘွား - 45.45%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - နေနေ16 နှင့် တီဘွား - 42.86%
အောက်တိုဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 26 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဆွိ, ဇာနည်စိုး, တာတာ, လူမုန်းနဒီ, ကျော်တိုး, မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ), မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, ငြိမ်းချမ်း, bagothar85, essential, g00gle, htun30, kaung kin lu, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, moonson, nyilinnge, pannuko, phyulayswe07, yelinoo, zo
Best members of the month (November)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ငြိမ်းချမ်း - 42.11%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ငြိမ်းချမ်း - 66.67%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ) - 50.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - minlatt နှင့် Thwe Khant - 42.86%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - arkaraung - 53.85%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - ဆွိ - 71.43%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ နှင့် မြန်အောင်သား - 53.85%
နိုဝင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 30 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ကိုပျင်း, ချယ်ရီမင်း, စနိုးလေး, ဆွိ, ဇာနည်စိုး, ကျော်တိုး, ခေါက်ရောင်းသား, ဇော်ရဲပိုင်, ဇေကြီး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, ငြိမ်းချမ်း, ငြိမ်းသူ, မြန်အောင်သား, နှင်း, Aung Aung, bagothar85, htun30, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, moe gyi, moe_poung, nyilinnge, pannuko, phyulayswe07, yelinoo, zo
Best members of the month (December)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - Bayint Naung - 63.64%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ငြိမ်းချမ်း - 81.82%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - HarryLwin နှင့် manawphyu - 37.50%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - minlatt ၊ နေမင်းမောင် နှင့် မေမင်းဆက်(ပုသိမ်မြေ) - 50.00%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - မောင်ပေါ်ဦး - 62.50%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - မောင်ပေါ်ဦး - 85.71%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ - 71.43%
ဒီဇင်ဘာလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, တာတာ, ကျော်တိုး, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, မြန်အောင်သား, နှင်း, AZM, bagothar85, HarryLwin, htun30, kaung kin lu, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, phyulayswe07, thureinsoe, yelinoo, zo
Best members of the month (January)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - Bayint Naung - 61.11%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - မြန်အောင်သား - 81.82%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - HarryLwin နှင့် ရုပ်ဆိုး - 29.41%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - နေမင်းမောင် - 72.73%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - အောင်ဗလ - 62.50%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ - 70.00%
ဇန်န၀ါရီလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 23 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ချယ်ရီမင်း, ဇာနည်စိုး, ရုပ်ဆိုး, ကျော်တိုး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, အောင်ဗလ, နှင်း, bagothar85, bunny, dusk, htun30, kaung kin lu, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, pannuko, phyulayswe07, scorpion20, yelinoo, zo
Best members of the month (February)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - Bayint Naung နှင့် ဒေါက်တာနေ၀င်းအောင် - 52.63%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - မြန်အောင်သား နှင့် မောင်ပေါ်ဦး - 50.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - ရုပ်ဆိုး - 75.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - minlatt နှင့် နေမင်းမောင် - 72.73%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - တီဘွား - 63.64%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - နေနေ16 ၊ ခေါက်ရောင်းသား နှင့် မြန်အောင်သား - 50.00%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ - 100.00%
ဖေဖေါ်ဝါရီလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 25 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, တာတာ, ကျော်တိုး, ခေါက်ရောင်းသား, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, အောင်ဗလ, ငြိမ်းသူ, arkaraung, AZM, bagothar85, Bayint Naung, dusk, htun30, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, pannuko, phyulayswe07, putty, thandaraung01, yelinoo, zo
Best members of the month (March)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဒေါက်တာနေ၀င်းအောင် - 45.00%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - မြန်အောင်သား - 72.73%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - ရုပ်ဆိုး - 60.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - နေမင်းမောင် - 61.54%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - phyulayswe07 - 66.67%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - ဆွိ - 66.67%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ - 66.67%
မတ်လအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 16 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, ကျော်တိုး, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, မွေဖု, bagothar85, dusk, htun30, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, pannuko, phyulayswe07, yelinoo, zo
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - azp09 - 52.38%
...............................................မောင်ပေါ်ဦး - 52.38%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ငြိမ်းချမ်း - 60.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - တာတာ - 52.94%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - ချစ်ညီလေး - 54.55%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - phyulayswe07 - 47.06%
........................................................ငြိမ်းသူ - 47.06%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - Myint Swe - 91.67%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - thureinsoe - 50.00%
ဧပြီလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, တာတာ, လူမုန်းနဒီ, ကျော်တိုး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မွေဖု, မြန်အောင်သား, Aung Aung, azp09, bagothar85, dusk, htun30, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, pannuko, phyulayswe07, yelinoo, zo
Best members of the month (May)
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဇာနည်စိုး - 40.00%
...................................................မျိုးဟန်ထက် - 40.00%
...................................................azp09 - 40.00%
...................................................ညိုမင်းလူ - 40.00%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - မျိုးဟန်ထက် - 66.67%
..........................................မြန်အောင်သား - 66.67%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - လူမုန်းနဒီ - 50.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - Hlwamkoko - 62.50%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - phyulayswe07 - 78.57%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - mgnyanlin - 66.67%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ - 72.73%
မေလအတွက် အကောင်းဆုံး ရေးသားမျှဝေကြသူများ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
Last edited by tu tu; 10-07-2012 at 10:22 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 17 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, ဘုန်းထွဋ်ကျော်, မျိုးဟန်ထက်, လူမုန်းနဒီ, ဇေကြီး, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, မြန်အောင်သား, dusk, htun30, kyawminkhoung, Lwin Thu, mgwinhlaing, phyulayswe07, yelinoo, zo
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ဇာနည်စိုး - 50.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - လူမုန်းနဒီ - 33.33%
...........................................ရုပ်ဆိုး - 33.33%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - ဒေါက်တာနေ၀င်းအောင် - 83.33%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - phyulayswe07 - 85.71%
(၆) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - mgnyanlin - 100.00%
(၇) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ - 75.00%
$ညိုမင်းလွင်$, ဇာနည်စိုး, တာတာ, မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, dusk, htun30, Lwin Thu, mgwinhlaing, yelinoo, zo
16-08-2012, 10:13 PM
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဇာနည်စိုး - 44.44%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ဇာနည်စိုး - 100.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - ရုပ်ဆိုး - 50%
...........................................တာတာ - 50%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - Hlwamkoko - 37.50%
...........................................manawphyu - 37.50%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - phyulayswe07 - 62.50%
$ညိုမင်းလွင်$, ဆွိ, ဇာနည်စိုး, နယ်သူ, မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, dusk, htun30, Lwin Thu, mgwinhlaing, phyulayswe07, yelinoo, zo
21-09-2012, 12:55 PM
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဇာနည်စိုး - 81.82%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ဇာနည်စိုး - 60.00%
......................................မြန်အောင်သား - 60.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - တာတာ - 71.43%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - manawphyu - 85.71%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - apri - 50.00%
တာတာ, ကေကေ2012, မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, dusk, htun30, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, yelinoo, zo
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဇာနည်စိုး - 53.33%
..............................................သူစင်ကြယ် - 53.33%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - kyawminkhoung - 60.00%
......................................ကျော်တိုး - 60.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - မောင်သံသရာ - 46.67%
(၄) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - phyulayswe07 - 58.33%
Last edited by tu tu; 08-12-2012 at 09:03 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, မြန်အောင်သား, dusk, Hla Hla Lay, htun30, kaung kin lu, kyawminkhoung, Lwin Thu, mgwinhlaing, minthike, pannuko, phyulayswe07, yelinoo
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - သူစင်ကြယ် - 50.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - ကြယ်စင်စိုး - 50.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - manawphyu - 71.43%
(၅) အကောင်းဆုံး တိုက်ရိုက်ရေးသားမျှဝေသူ - phyulayswe07 - 75.00%
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, အောင်ဗလ, မြန်အောင်သား, dusk, htun30, Lwin Thu, yelinoo
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - yelinoo - 69.23%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ငပေကြီး - 90.00%
..........................................bunny - 60.00%
(၄) အကောင်းဆုံး ဆောင်းပါးဆရာ - manawphyu - 75.00%
(၅) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - aungbawdi - 50.00%
.......................................................နေနေ16 - 50.00%
(၆) အကောင်းဆုံး Uploader - $ညိုမင်းလွင်$ - 50.00%
.........................................ko gyi aung - 50.00%
$ညိုမင်းလွင်$, ငပေကြီး, နယ်သူ, မေဦးမွန်, အောင်ဗလ, မြင့်မိုရ်, မြန်အောင်သား, dusk, htun30, Lwin Thu, pannuko, yelinoo, zo
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - yelinoo - 71.43%
...............................................မောင်ပေါ်ဦး - 71.43%
(၅) အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးချီးမြှင့်သူ - တေဇ - 50.00%
.................................................နေနေ16 - 50.00%
$ညိုမင်းလွင်$, ငပေကြီး, တာတာ, မြန်အောင်သား, bunny, dusk, Lwin Thu, ma mee, pannuko, zo
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဦးအသေးလေး - 75.00%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - ငပေကြီး - 100.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - တာတာ - 80.00%
(၄) အကောင်းဆုံး Uploader - chitthawkabarmyae - 100.00%
ငပေကြီး, တာတာ, ဦးအသေးလေး, မောင်ပေါ်ဦး, အောင်ဗလ, မြန်အောင်သား, bunny, dusk, Empathlover, Lwin Thu, pannuko, princess, zo
(၁) အကောင်းဆုံး နည်းပညာမျှဝေသူ - ဦးအသေးလေး - 83.33%
(၂) အကောင်းဆုံးကူညီပံ့ပိုးသူ - မြန်အောင်သား - 75.00%
(၃) အကောင်းဆုံး ကဗျာဆရာ - dusk - 100.00%
(၄) အကောင်းဆုံး Uploader - chitthawkabarmyae - 66.67%
.....................................powerlight02 - 66.67%
ရန်လေး, မောင်ပေါ်ဦး, dusk, Lwin Thu, pannuko, zo
Best posts and Best members လစဉ်ရွေးချယ်ရေးအစီအစဉ်